Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Medicines mostly used (3) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (G to I)
Medicines mostly used (3) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (G to I)
246. Gabapentin (Gabata-300) အတက်ပျောက်ဆေး။ 300 TDS (Max. 1800 mg/day)
247. Ganciclovir (Cytovene IV) 10 mg/kg AIDS ရှိနေစဉ် မျက်စိအတွင်းရောင်ခြင်း Retinitis ဆေး၊
248. Gasnil Tablets = Simethicone လေဆေး၊ အစာမကျေ၊ ဗိုက်နာ၊ 80 mg TDS
249. Gatifloxacin 400 mg OD လူစုလူဝေးမှရသော နူမိုးနီးယား၊
250. Gemcal (Alkem) = Calcetriol + Calcium Carbonate + Zinc ကယ်လ်စီယံနည်းခြင်း၊ အရိုးပြော့ ရောဂါ၊ အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်တတ်သည့် အရိုးအားနည်းရောဂါ၊
251. Gemifloxacin = Fluoroquinolones ပဋိဇီဝဆေး၊ (Factiv) 320 mg နူမိုးနီးယား၊ လေပြွန်ရောင်၊
252. Gentamicin ပဋိဇီဝဆေး၊ ကျောက်ကပ်-အသဲ မကောင်းလျင် သတိဖြင့် ပေးပါ၊
a. Gentamicin5mg/kg Gentamicin (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM) ပြင်းထံသော ဗက်တီးရီးယား ဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်၊
b. Gentamicin2mg/kg TDS + Ampicillin 1-2 Gm QID ဝမ်းဗိုက်ထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောဂါပြင်းလျင်
c. Gentamicin 1.7 mg/kg6or 8 hourly ကလေးများ 2.5 mg/kg BD မွေးစမှ ၆ လ၊ 2.5 mg/kg TDS ၆ လ မှ ၁ဝ နှစ် 2-2.5 mg/kg TDS ၁ဝ နှစ်အထက် 1.5 mg/kg TDS; (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM)
d. Gentamycin 1 mg/kg TDS မွေးစကလေး ပိုးဝင်ခြင်း၊ Neonatal infections Gentamycin2mg/kg IV loading dose followed by 1.5 mg/kg TDS သဲခြေအိပ်ရောင်ခြင်း၊
e. Gentamicin Sulfate Cream 0.1%w/w Folliculitis, Furunculosis အနာ၊ Paronychia ခြေစွယ်ငုတ်၊ အရေပြားနာတွေအတွက် လိမ်းဆေး။
253. Gentian violet = Methylrosanilinium chloride ဖန်းဂတ်စ် နှင့် ဗက်တီးရီးယား အတွက် လိမ်းဆေး၊ ပါးစပ်နာ၊ မှက်ခရုနာ၊ မီးလောင်နာ၊ အားကစားသမားခြေထောက်၊ ပွေး၊ မှိုရောဂါ။
254. Glibenclamide, Glimepiride = ဆီးချိုအတွက်ဆေး။
255. Glucosamine and Chondroitin = Osteoarthritis အရိုး-အဆစ်နာသက်သောဆေး။
256. Glutaraldehyde = ကြွက်နို့ အတွက်လိမ်းဆေး၊ 10% BD x2months
257. Glyceryl Trinitrate 0.5 to 1.0 mg နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ (sublingual) 500 micrograms;
258. Gripe Water ကလေးများဗိုက်နာ၊ ကြို့ထိုး၊ လေတက်၊ ဝမ်းစိမ်း၊
259. Griseofulvin 250–500 mg စားဆေး တနေ့ ၂ ကြိမ်ပါ ပေးပါ။ Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ခြေထောက်၊ ဆိုးရင်၊ ပြန်ဖြစ်ရင်။ Griseofulvin Tinea Cruris (Jock Itch) ပွေးတမျိုး၊ Griseofulvin 250–500 mg ကို တရက် ၂ ကြိမ်။ ၁-၂ ပါတ်နဲ့ ပျောက်တယ်။
260. Griseofulvin, Grisactin forte (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှို၊ ပွေး ရောဂါဆေး၊ = capsule or tablet, 125 mg, 250 mg; 500 to 1000 mg daily; Children 10 mg/kg daily အရေပြားဖြစ်လျင် ၁-၆ ပါတ်၊ လက်သည်း- ဆံပင် ဖြစ်လျင် ၆ လ ကြာ ပေးရမည်။
261. Gyne-Lotrimin = Clotrimazole Vaginal Cream မွေးလမ်းကြောင်း ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါ၊
262. Hansaplast, Handyplast တခါသုံး အနာကပ်ပလာစတာတွေက ဆေးမပါဘူး။
263. HbRich = Vitamin B12, Ferric Ammonium Citrate, Folic acid 10-20 ml OD/BD သွေးအား ကောင်းစေသည့်ဆေး၊
264. Heparin (Na) and Heparin (Cl) 5,000 IU IV, 20,000-30,000 IU IV Infusion, 5,000 IU TDS S/C နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နှလုံး (Attack, Stroke) ရခြင်း၊
265. Hermin Injection (Essential Amino acids) မိခင်များအတွက် မရှိမဖြစ်သော (အမိုင်နိုအက်စစ်) ခေါ် ပရိုတင်းများ၊
266. Hydralazine သွေးတိုး၊ အစာအိမ်နာ၊ 25 mg BD and 50-300 mg in 2-4 doses PET အရေးပေါ် သွေးတိုးခြင်း၊ = 5-20 mg IV may repeat after 20 minutes
267. Hydrazide, Hydrochlorothiazide, Aquazide = ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးတိုး၊ ကျောက်ကပ် ရောင်ခြင်း၊ စတီရွိုက်ကြောင့်ရောင်ခြင်း၊ နှလုံးမရောင်ခြင်း၊ အသည်းခြောက်၍ ရောင်ခြင်း၊ = 12.5-25-50 mg OD or BD; 50-200 mg Daily; ကလေး 1-2-3 mg/kg OD/BD, not to exceed 37.5 mg/day in two divided doses
268. Hydrite = Per sachet NaCl 520 mg, Trisodium citrate dihydrate 580 mg, KCl 300 mg, Anhydrous glucose 2.7 g ဓါတ်ဆား 1 tab/200 mL;2tab/200 mL
269. Hydrochlorothiazide ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ = 25 mg နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့်ရောဂါ၊
270. Hydrocortisone Sodium Succinate, Solu-Cortef (ကော်တီကို-စတီရွိုက်) ဆေး၊ (ရှော့ခ်) ဖြစ်လျင် အရေးပေါ် ပေးရသည်။ ၁ဝဝ မီလီဂရမ်ကို သွေးပြန်ကြောထဲထိုးပေးရသည်၊
271. Hydrogen Peroxide 3-6% = Disinfectant, Antiseptic ပိုးသတ်ဆေး၊ အနာကို သန့်ရှင်းရန်၊ ပါးစပ် ဆေးရန်၊ ဆီးအိမ်သန့်ပေးခြင်း၊ ပျက်စီးနေသော တစ်ရှူး၊ သို့သော် ကောင်းနေသည့် အရေပြားအားမသုံးရ။
272. Hydrogen peroxide ဆေးရည်လိမ်းနိုင်တယ်။ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညှင်း၊
273. Hydroxyquinoline sulphate = အနာဆေးရန်၊ ပါးစပ်ငုံရန်၊ အရေပြားသန့်ရန်။
274. Hydroxyzine = Antihistamine ယားတာအတွက်ပေးရင် 25 mg တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်ပေးနိုင်တယ်။ စိတ်ငြိမ်စေချင်ရင်၊ အိပ်စေချင်ရင် 50 to 100 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်အထိ ပေးတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ = ခေါင်မူး၊ အိပ်ချင်၊ မျက်စိဝါး၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ မျက်လုံး-မေး-လျှာ-လည်ပင်း ကြွက်သားတွေ လှုတ်ခြင်း၊ လက်တုံ၊ စိတ်မရှင်း၊ တက်ခြင်း။ Acute Periphreral Vertigo ရုတ်ရက် အပြင်းအထံ ခေါင်းမူးရောဂါ အရေးပေါ်ဆေး 25-50 mg6hourly သောက်ဆေး၊
275. Hyoscine (Butylbromide) အစာအိမ်-အူ-သားအိမ်-ဆီးလမ်းကြောင်း-သည်းခြေလမ်းတို့နာခြင်း။ ရာသီဆင်းချိန်နာခြင်း၊ အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားခြင်း။ ခရီးသွားစဉ်အန်ခြင်း၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = မျက်စိ အမြင် ထိနိုင်၊ အာခေါင်ခြောက်မည်၊ ဆီးအိမ်တင်းနိုင်၊ Oral 10-20 mg 3-5 times daily. IM/IV 20-40 mg 3-5 times daily
276. Iazepam (Valium) 5-15 mg (Max 30 mg) စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊
277. Ibuprofen, Ibugesic (NSAIDs) ဆေးအုပ်စု။ 200-400-800 mg TDS/QID လစဉ်ရာသီလာစဉ် နာခြင်း၊ နာခြင်းအမျိုးမျိုး၊ သာမန်အကိုက်၊ အဖျား၊ ကလေး၊ ၆လ မှ ၁၂ နှစ်၊ ၅-၁ဝ မီလီဂရမ်/ကေဂျီ၊ အများဆုံး ၃့၂ ဂရမ်၊ ၁ဝ ရက်ထက် မကျော်စေရ၊ အစာနှင့်တွဲပေးပါ။ ဆိုးကျိုးများ = အနီရောင်အင်ပြင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ နားထဲကအသံထွက်၊ အိပ်ချင်၊ ဗိုက်နာ၊ ပျိူ့၊ ဝမ်းပျက်၊ အစာအိမ်နှင့် အူအနာ။
278. Idoquinol 650 mg TDS x 21 days followed by Chloroquine 500 mg daily x 14 days အမီးဘားပိုးကြောင့် အသဲပြည်တည်ခြင်း၊
279. Imferon Injection (50mg of elemental iron/ml) သံဓါတ်တိုးစေရန် ထိုးဆေး၊
280. Imidazoles or Ciclopirox ဆေးလိမ်းပါ။ Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ခြေထောက်၊
281. Imipenem (Primaxin IV) 50 mg/kg နူမိုနီးယား၊ နှလုံးအတွင်းသား-အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ပြည်တည်နာ၊ မေ့ဆေးပေးစဉ် အစာခြေအရည် နည်းစေရန်၊ အရိုးအဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြှေး ရောင်ခြင်း၊ ယောက်ျားဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း၊ (125-500 mg DB-TDS IM/IV) (15 mg/kg TDS IV Infusion)
282. Imipramine 10-150 mg ခေါင်းကိုက်ခြင်း အမျိုးမျိုး၊ 50-100 mg HS ညအချိန် ဆီးသွားခြင်း၊
283. Indapamide = Natrilix SR 2.5 mg OD and 2.5-5 mg OD အရောင်လျှော့စေသည့် သွေးတိုးကျ ဆေး၊ 0.25 mg once as single dose in morning
284. Inderal = Propranolol (ဘီတာ-ဘလော့ကား)
285. Indomethacin (Indocin) = 25-50 mg BD/TDS/QID အနာ-အကိုက်-အရောင်ဆေး၊ နာခြင်း အမျိုးမျိုး၊ Trauma, Rheumatic, TB, Gout; 75-150 mg daily ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မိုင်ဂရင်း၊
286. Insulin, Sulfonylurea injection and Suspension ဆီးချိုအတွက်ဆေး၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ဆေးထိုးသည့် နေရာ နီ-ရောင်-ယား၊ ကိုယ်ရောင်၊ အလာဂျီရ၊
287. Intraconazole မှိုရောဂါအတွက်ဆေး။
a. Vaginal Yeast infections (Thrush) 200 mg BD;
b. Shin fungus infection = 200 mg OD x7days;
c. Infections of nails – 200 mg OD x3months;
d. Candidia infections of mouth, throat and oesophagus = 100 mg OD x 15 days;
288. Iodine = bactericidal, fungicidal, tuberculocidal, virucidal, and sporicidal; Iodine ကို Alcohol နှင့်ရော၍ 2% ကို ခွဲစိတ်ခြင်း မပြုမီ သုံးသည်။ Povidine သည် ရေနှင့်စပ်ထားသော Iodine 10% ဖြစ်ပြီး ပိုကောင်းသည်။
289. Iodochlorhydroxyquinoline မှို Fungus ကို နိုင်တဲ့ဆေး။
290. Ipratropium bromide ပန်းနာနှင့် အသက်ရှူလမ်းပိတ်ရောဂါဆေး၊ = inhalation (aerosol)
291. Isoniazid (INH) = တီဘီဆေး၊ အခြားဆေးနှင့်တွဲပေးရသည်၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အန်-ပျို့၊ အလာဂျီရ၊ မျက်စိအားနည်း၊ အသံထိခိုက်၊ သွေးထိခိုက်၊ Fixed-dose Combinations of Drugs for TB by WHO = တီဘီ ကုသရန် ဆေးအတွဲများ၊
292. Isopropanol Antiseptic ကို ဆေးရုံ-ဆေးခန်းသုံး Surgical alcohol ဟု ခေါ်သည်။ ဆေးမထိုးမီ အရေပြားကို သန့်ရှင်း ပေးနိုင်သည်။
293. Isosorbide (Dinitrate) နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ။ 20-40 mg BD/TDS Orally/Sunlingual ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အသားနီ၊ မူးဝေ၊ ခေါင်းကိုက်၊
294. Itrabene (Itraconazole) = Fungal Infections (Candida Infections, Dermatophytosis, Fingernail, Toenail, Oral Thrush, Vaginal Yeast Infections) 1 BD မှိုရောဂါဆေး၊
295. Itraconazole (Sporanox) မှိုအတွက်စားဆေးကို 200-400 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၂ ခါခွဲသောက်လဲ ရတယ်။ ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာကြာသလို သောက်ရမယ်။ ဥပမာ ၆ ပါတ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေက ဝမ်းလျှော-ဝမ်းချုပ်၊ လေထ၊ ခေါင်းကိုက်၊ မူး၊ ယား၊ အစာမကျေ၊ ပါးစပ်နာ၊ သွးဖုံး သွေးယို၊ ချွေးထွက်၊ ကြွက်သားနာ၊ အတူနေခြင်စိတ်နည်း၊ စိတ်ကျ၊ နှာစေး၊ အိပ်မက်မက်။
a. Infections of nails လက်သည်း-ခြေသည်းမှို၊ Itraconazole 200 mg daily ၁-၁၂ ပါတ်၊ Terbinafine 250 mg daily ၁ လ၊ Griseofulvin က အရေပြားမှာ ဖြစ်တဲ့ မှိုရောဂါ တွေအတွက် အကောင်းဆုံး။
b. Tinea Corporis or Tinea Circinata (Ringworm) ပွေး၊ Itraconazole 200 mg daily or Terbinafine 250 mg daily နဲ့လဲ ရတယ်။
c. Tinea Cruris (Jock Itch) ပွေးတမျိုး၊ Itraconazole 200 mg daily for2weeks or 400 mg daily for 1 week or Terbinafine 250 mg daily for 2–4 weeks လဲရတယ်။
d. Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ခြေထောက်၊ Intraconazole မှိုရောဂါအတွက်ဆေး။
e. Vaginal Yeast infections (Thrush) မွေးလမ်းမှို 200 mg BD;
f. Candidia infections of mouth, throat and oesophagus ပါးစပ်၊ အစာမြိုပြွန်မှို 100 mg OD x 15 days; 200-400 mg တရက်ခြား ၇ ရက်သောက်ပါ။
296. Ivermectin 200 μg/kg stat and repeat after6months Filariasis ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ = scored tablet,3mg,6mg;